पेटको सहायताले प्रेमीको हत्या | Makalukhabar.com
पेटको सहायताले प्रेमीको हत्या
मंसिर २० । दुनियाँमा मान्छेको हत्या गर्नका लागि घाँटी थिचिएको, हतियार प्रयोग गरिएको, विष खुवाइएकोजस्ता घटना त सुनिएकै हो । तर, एकजना महिलाले आफ्नो पेट प्रयोग गरी प्रेमीको हत्या गरेकी छन् ।
अमेरिकाको पेन्सिल्भेनियामा एक महिलाले आफ्नै पेटले थिचेर प्रेमीको हत्या गरेकी हुन् । ४४ वर्षीया विन्डी थोमसले आफ्नो पेटले थिचेर प्रेमी किनो बटलरको हत्या गरेको कुरा प्रहरीसमक्ष स्वीकारेकी छन् ।
उनको त्यो बयान सुन्दा पुलिस पनि झसङ्ग भएका थिए । आखिर उनले कसरी र किन यस्तो गरिन् ? पुलिस अधिकारीका अनुसार पेटले थिचेर मान्छेको हत्या भएको यो सायद पहिलो घटना हुनसक्छ ।
वास्तवमा पेटले थिचेर प्रेमीको हत्या गर्ने ती महिलाको जिउको वजन १ सय ३३ किलो थियो । त्यसैले उनले आफ्नो भारी भरकम पेटले ब्वायफ्रेण्डको गला थिचिदिइन् । जसका कारण बटलरले स्वास फेर्न पाएनन् र उनको मृत्यु भयो ।
डिसेम्बर ३ मा अदालतमा भएको सुनुवाइका क्रममा बोल्दै आरोपी महिलाले भुलबस यस्तो हुन गएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेकी थिइन् । आफू रक्सीको नशामा रहेको र अचानक प्रेमीमाथि बस्दा थिचिएर ज्यान गएको जिकिर उनको छ । एजेन्सी
आफूलाई ‘भर्जिन’ बताउने युवतीले रहस्यमयी तरिकाले बच्चा जन्माएपछी
फागुन ९ । आफूलाई ‘भर्जिन’ बताउँने र कहिले पनि प्रेमी नबनाएको दाबी गर्ने एक युवतीले रहस्यमयी तरिकाले बच्चालाई जन्म दिएकी छिन् । Continue Reading...
जन्ती नाच्दा पुल भाँच्चिए पछि
माघ ६ । विवाहमा जन्ती खुबै नाच्छन् । बाजागाजासहित बेहुली लिन गएका जन्ती आफूले सक्ने जती जिउ मर्काउँछन् र खुट्टा बजार्छन् । तर शनिबार राती जन्तीको यही नाचले भारतको नोयडास्थित एउटा पुल भाँच्चिदा बेहुलालगायत लगभग १५ जना नालीमा खसेका छन् । जसमा दुई बालक घ... Continue Reading...
घरभित्र बस्दा हेल्मेट लगाउँनुको कारण यस्तो पो रहेछ यी परिवारको
फागुन ५ । दुनियाँमा आफ्नो घर नै एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ मानिसले आफूलाई सबैभन्दा धेरै सुरक्षित महसुस गर्न पाउँदछ । तर अमेरिकाको टेक्सासमा रहेको एउटा परिवार आफ्नै घरभित्र बस्दा पनि हेलमेट लगाएर बस्नु परेको छ । परिवार... Continue Reading...
यि युवाले १० लाख पाउन्डकाे चिठ्ठा जितेपछी किन माक्स लगाएर पुरस्कार थापे ?
फागुन ३ । जमैकाका एक युवकले अमेरिकामा १० लाख पाउन्डको चिट्ठा जितेका छन् । यद्यपी, उनले चिट्ठा जितेको ५४ दिनपछि मात्र पुरस्कार थापेका छन् । उनी पुरस्कार थाप्न मास्क लगाएर पुगेका छन् । एक वेबसाइटका अनुसार युवकक... Continue Reading...
भ्यालेन्टाइन डेका लागि रू १ हजारमा आफैंलाई बेचिरहेका छन् यी युवा
फागुन १ । भ्यालेन्टाइन्स डे विशेषतः जोडीहरुले व्यग्रताका साथ प्रतिक्षा गरिरहेका हुन्छन् । तर यदि तपाईं यो वर्ष पनि ‘सिंगल’ हुनुहुन्छ र पार्टनरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो खबर तपाईंको लागि हुनसक्छ । ... Continue Reading...
अपराध स्वीकार गराउन प्रहरीद्वारा सर्पले बेरेर यातना (भिडियाेसहित)
माघ २९, काठमाडौँ । चोरीको आरोप लागेका एक युवालाई प्रहरीले सर्पले... Continue Reading...
श्रीमतीकाे हत्या गरेपछी पुरारात शव सँग बिताएर बिहान आत्मसमर्पण गरेपछी
माघ २८ । रिसको आवेगमा आएर मान्छेले कतिसम्म गर्दा रहेछन् । त्यस्तै रिसको झोँकमा एक जनाले आफ्नी गर्भवती श्रीमतीको हत्या गरेका छन् । तर अचम्म लाग्ने कुरा के भने, उनी त्यो रातभर घाँटी रेटिएकी आफ्नी श्रीमतीसँगै सुते र बिहानै प्रहरीमा गएर आत्मसमर्पण गरे । Continue Reading...
माघ २७ । कुनै पनि पुरुष १३ वर्षको उमेरमा पिता बन्न सम्भव होला ? आजकल त यस्ता घटना सुन्न पाइएको छैन । तर बेलायतमा चाहिँ कुनै समय एकजना किशोर १३ वर्षको उमेरमै बाबु बनेका थिए । सन् २००९ मा जब यो खबर आयो, तब सबै छक्क परे । कतिपयले त यो खबर पत्याउनै सकेनन्... Continue Reading...
बाघकाे सिकार गर्ने कुकुर
माघ २४ । भारतको महाराष्ट्रस्थित यवतमाला जिल्लाको पाँढरकावडा इलाकामा पछिल्लो समय एक पोथी बाघले आतंक मच्चाइरहेको थियो । उक्त बाघलाई नियन्त्रणमा लिने सबै प्रयास असफल भएपछि प्रशासनले बाघ मार्नका लागि दुईवटा कुकुर परिचालन गरेको छ । Continue Reading...
माघ २२ । प्रत्येक दिन हलिउडमा एउटा न एउटा नयाँ फिल्महरु सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । फिल्म जति नै रिलिज भए पनि कुनै फिल्महरु ऐतिहासिक हुन्छन् जुन सबै वर्गका मानिसहरुले सदावहार रुचाउँछन् । तिनै मध्येको त्यो एक फिल्म हो ‘टाइटनिक’ । Continue Reading...